Umhla My Pet » Indlela ungasondeli emfazini Online - Ukusuka imbono yebhinqa
ukubuyekezwa: Jan. 21 2021 | 5 min ukufunda
Phambi kokutshata ndaba namava isabelo sam okulindelekileyo ukuthandana online, kuquka e-mail ezininzi ukusuka amasoka ezinokwenzeka online. Ngokwenene sifumana ukubona okulungileyo, ababi na ledada. Ndiya ncokola abaninzi abahlobo bam ngamava abo ukuthandana online. Eli nqaku sishwankathela into isebenza kakuhle ukuba i-imeyile kuqala umfazi yaye yintoni eyenza aqhube kwethu igazi ebandayo kunye nezandla zethu betha SUSA phambi kokuphela komhlathi!
Musa nobuhlobo - Oku izandi ocacileyo uya kumangaliswa yindlela amadoda amaninzi ukulibale oku xa bathumela nokuvulwa ye-imeyile. Nto nje, ngokungathi inxalenye ubhalo samadoda lobuchopho kungenelele kwaye ufuna ukufumana ilungelo ishishini (ukuthetha efowunini / ukuthandana okanye ngesondo). Ngelishwa singabafazi azisebenzi ngaloo ndlela. Sithanda nkxu uzwane yethu size sibone indlela esivakalelwa ngayo kuni kuqala. Sithanda ukuba romanced kwaye namava zobuhlobo ingqalelo kuwe. Bacinge ukuba 'esotha usinyuse' ukuba uthanda. Soloko uvula lobuhlobo, encoko ye-imeyile (Kungekudala kakhulu) kwaye uya kufumana iimpendulo ezininzi.
Musa ukugcina kuyo ukukhanya umdla - Kukho ulungelelwano phakathi umdla / ingqalelo ambambe nangaphandle udonga / off-ukubeka. Ndiyazi ukuba kusuke kuvakale ngathi uxinzelelo xa uzama ukubhala ukuvulwa elungileyo ye-imeyile. Icebiso ibalaseleyo kumnika sona ukuba wena. Funda kwicandelo ngezantsi indlela yokuphepha ndikruqulwe kwaye apha isibini yeengcebiso ukuze akuncede kubonana njengoko umdla mxelele Nixabiseke uphendula. Funda inkangeleko yakhe ngenyameko izimvo into kuyifumana apho. Linxulum umva into othe wagagana ukuba kunokwenzeka ukwenza uqhagamshelwano. Yokuncoma umsebenzi elibonelelwe kakuhle bengengabo ngabaxwa yaye lokwenene. Enye ukumncoma ezincinane ndimkhuphile ye-imeyile kuqala. Unako kwakhona ukuthetha into ethe yenzeka kuwe imihla yakho, into ebonisa isuntswana nina. Ukuba Ngumfo funny uzive ukhululekile ukusebenzisa uburharha kancinane, nje ungayibaxi. uburharha owomileyo lula baqondwa nge e-mail. Abafazi ukudibanisa ngokusebenzisa neemvakalelo kunye namava ekwabelwana, kwaye ukuba uyakwazi ukwenza uqhagamshelwano naye wena nesiqingatha kukho.
Yenza ukugcina mfutshane - Nangona sifuna ukuba abe nobubele kwaye mnandi asifuni isincoko. Iphepha yonke yokubhala mhlawumbi uya kuthumela ukuba ulale ukuba sifunda nto konke konke, Noko riveting kunokuba. Okubhetele ukuze ligqithe uyifunde kwaye siya ubagwebe sizibuze ukuba uziqeshile luyixhalabele xa sivula i-imeyile ukubona yonke iphepha lokubhala! Yakho ye-imeyile kufuneka lufikeleleke kwaye kulula ukuba ukufunda, leyo ethetha mfutshane nengqalelo ambambe. Yiya umgangatho phezu ubungakanani. Ezimbalwa imihlathi emifutshane impactful kunye nokumncoma iresiphi yimpumelelo.
Musa yindinisa - Kulungile ndiyaqonda kunokuba nzima ukwazi ukuba bathi, ngoko ke ndiza kukunika ezimbalwa ngothsuphe ekhawulezayo. Uyadika abhala uluhlu iimpahla ngawe ezifana iimpawu zakho, okanye uthumela umyalezo apho ubuza nje naye ukuba yena ukuze bethetha akukho olunye ulwazi. Ukuba ithe ufumane ukuva ubuntu bakho yakho ye-imeyile akayi kwazi ukuba uyafuna ukuthetha nawe. Kwaye ngoko yena uya nje bento ukuphendula. Ufuna ukuba azive ukuba zibhale umva. Musa uyibhale nje iprofayile yakho, uya sifunda ukuba ukuba unomdla.
Musa samasi - Amadoda amaninzi aya overcompensate uzame nzima kakhulu. Oku khangela ezifana nokusetyenziswa uncome kwaye / okanye uburharha, kwaye isoloko kwiindawo ngangoko samasi, kwaye kwamaza njengetyhudisayo. Bhala kuye ngokungathi ukuthetha nomhlobo nemazi, eya kuthintela ukuba awuhambi kakhulu kwaye begaxeleke ingqondo iseti amatiletile ukuzithandisa kuye. Sebenzisa uburharha nezincomo kodwa ngokuvimba. Kanye ityuwa yenza ngcono ukutya kulungile kuphela xa sisetyenziswa ngokuvimba, Lo mgaqo uyasebenza apha.
Musa udwelise zonke iimfuno zakho - Ngamanye amaxesha abantu baya udwelise zonke izinto olifunayo kwi umfazi kuloo ye-imeyile kuqala. Kwaye ngamanye amaxesha baya dwelisa zonke iimpawu ukuba abafuni (kuhanahanisa - nokuba mandundu!) Oku icinyiwe ngqongqo kwaye kuya umfazi ebandayo. Yena akubonakali ukuba baphendule xa usenza oku.
Musa SLAG off nabanye abafazi ukhe wadibana online - Ngelishwa oku kwakusenzelwa eqhelekileyo ngemihla yam ukuthandana online, kwaye isoloko wandibuyisa abandayo. Oku eziva kakhulu umfazi ukuphulaphula umntu slagging off omnye umfazi uye yomhla. Ngasemva kweengqondo zethu ukuba bamangalisiwe ukuba siza kwabelana sinye isihlo njengoko kuye kwaye kusenza sizive kwi tenderhooks bezibuza ukuba wena, njengoko zigweba kuthi njengokuba apha. Ukuphepha le isibetho ezifana.
Musa ukuthetha ngesondo kwie-mail kuqala! - Ndiyaqonda ukuba xa kukho ibhinqa enomtsalane ocinga ngokwasemzimbeni, yaye akukho nto iphosakeleyo lo. Kodwa singabafazi zibuthathaka kakhulu malunga acengwa ubonisiwe ngesondo. Kuba abafazi abaninzi basebenzisa kwinxuwa ukuthandana online, oku sisizathu ephambili thina kukho, besijonge ukuthandana kunye / okanye iqabane. Ndiyazi kukwanjalo kuba uninzi amadoda kwisiza ukuthandana kakhulu, kwaye ngelishwa kukho singabantu abaninzi nje apho kuba befuna awayekiswa. Kunye radars zethu ngobunono ukwenzela ukubona loo madoda. Siya sikrini ngaphandle ngokukhawuleza kakhulu, Ngoko ke kuphephe ndiligwala omnye 'loo madoda'. Kuphephe siyikhankanye into ngesondo kwi e-mail wakho kuqala. Ndiyazi ukuba kukho amacebiso phandle oyindoda 'kulanda bakroli leyo ethetha ekwakheni kukwanekwa inkanuko, kwaye oku konke kuhle yaye kulungile, ke uluvo lwam ayikasebenzi ukuthandana online. Ubuncinane kuphela imisebenzi xa kwenziwe ngendlela ethile. ukudlala ngothando Fun uqaqambile, kodwa akuyi kwenza kakhulu ukuba nqanaba xa nithe nafika kulo ngokwesondo kakhulu kunxibelelwano wakho kuqala. Ukuba thina bafazi ke kunenkqatho. Kuvakala ngathi emfutshane yaye sikholelwa omnye ukwazile ozama le ndlela phezu thina. khumbula, ufuna ukuba azive. Sebenza kwi uxhulumaniso lokuqala, ngoko abathile ukudlala nokuthantamisa.
Ngaphezu kwako konke ukufumana ingqondo yakho ibekwe kakuhle - Yona ibe wasezulwini, kwaye khumbula yena umfazi nje omnye ezininzi. Ukuba unee ngxaki eku kunye nabafazi intanethi kunye nokufumana iimpendulo imiyalezo yakho, ujonge engqondweni yakho lokuqala. Uziva lithemba? Ngaba onke amathemba akho enye ye-imeyl yakho xa ungayithumela? Ukuba ngoko oku kuza kulo kwie-mail kwaye iya kubeka ebafaka. Umsebenzi ukuzithemba kwakho kwaye ukunyameka ukuze uyazi kukho iinketho ezininzi kuwe. kuya kufika imihla yakho ngesiphumo nayiphi 1 e-mail ayibalulekanga. Oku kuya kufuneka ukuba nako ukuthumela fun, imiyalezo ilula kwaye ukukhanya zilumkileyo ukuba uza kufumana impendulo elungileyo.